China SEBIC ike di elu nwanyị na-emepụta ụlọ na ndị na-emepụta | Funncycle
Maka ụdị a, anyị tinyere wiil na CST 28 dị larịị yana ejiri taya taya nke anụ ọhịa 2.0, nke mere na ọ nwere ike ịgbagharị n'ọtụtụ mgbawa, bumps, na oghere dị mfe iji hụ na ọ nweghị ihe ọ bụla na-egbochi gị n'ụzọ gị n'oge dị mma .
Moto Brushless, 36V 250W N'azụ Motor BAFANG
Aha Akara BORITA
Nọmba nlereanya BEF-RH28RF
Breeki Merchanic Disc breeki
Batrị 36V 10.4AH, Lithium Batrị, na 2A chaja-SANS
Maka ụdị a, anyị tinyere wiil na CST 28 dị larịị yana ejiri taya taya nke anụ ọhịa 2.0, nke mere na ọ nwere ike ịgbagharị n'ọtụtụ mgbawa, bumps, na oghere dị mfe iji hụ na ọ nweghị ihe ọ bụla na-egbochi gị n'ụzọ gị n'oge dị mma . N'ihe niile dị iche iche a, anyị ga-eji ya mee ihe ga-eme ka ị na-echegbu onwe gị maka ogologo oge. Nke a pụtara na ị ga-ahụ ngwa ngwa ọsọ ọsọ Shimano 8, ọkpọkọ ikuku hydraulic dị ike, racks, fenders, na ọkụ LED na-enwu gbaa n'ihu na azụ nke igwe kwụ otu ebe.
- The omenala aluminum etiti na Como ọcha ụlọ batrị na moto, mgbe ọ ka na-edebe fechaa Njirimara na mara maka.
Ejikọtakwara ya na etiti ma bụrụ nke a na-emezi maka ịnya obodo. Ọ na-emetụ n'ahụ na-emetụta ike nke ịda iwu gị, yabụ na ị na-esikwu ike karị, ka ike ọ na-enye gị. Na ihe dị n'ime eriri eriri ụgbọala, ọ na-eme nke a na-enweghị mgbakwunye vibration maka smoothest na ọtụtụ nkịtị ịnyịnya na-ekwe omume.
- Anyị mere batrị omenala 36v 11.6AH ka ejikọtara ya na etiti ahụ, na-ewepu ya maka nnweta dị mfe, yana akpọchi maka nchekwa agbakwunyere. Ọ na-ekwuputa na ngosipụta ahụ ma nwee ọtụtụ ụdị iji bulie arụmọrụ na oke. Maka atụmatụ dị iche iche dabere na ọtụtụ mgbanwe, biko rụtụ aka na Turbo Range Calculator.
Nke gara aga: SEBIC ọdịnihu obodo ọhụrụ kachasị ọkachamara ebikes
Osote: SEBIC enduro mid n'ịnyịnya moto n'okporo ụzọ ebikes